Talaabooyinka lagu Abuurayo CV soo jiidasho leh: Talaabooyinka lagu Abuurayo Resume Wanagsan | Hal-abuurka Online
Nerea Morcillo | | General, Tricks
Hadda, waxa jira dad badan oo u baahan manhaj waxbarasho oo ku habboon doorashadooda iyo shakhsiyadooda. resume A wanaagsan ma aha oo kaliya ka dhigi kartaa in aad dareento xitaa more, laakiin waxa kale oo aad gaari kartaa a sawir kaamil ah oo soo jiidasho leh dhammaan ujeedooyinka aad fulin doonto.
Maqaalkan kaliya kuma jebineyno inaan kugu jiheyno goobta shaqada iyo fursadaha shaqo, laakiin sidoo kale, waxaan dooneynaa inaan ku tusino inta badan, sida loo gaaro waxaas oo dhan iyadoo la abuurayo manhaj ku habboon.
Dhowr tillaabo oo fudud waxaad ku gaari kartaa a profile guul.
1 Vitae manhajka
1.2 Khaladaadka suuragalka ah
1.3 Noocyada shaqada
2 Talaabooyinka la raacayo
2.1 Sifee astaanta wanaagsan ee naftaada
2.2 Ku dar macluumaadka xiriirka
2.3 Ku darso xirfadahaaga
2.4 Xooji CV-gaaga
2.5 Samee shaqooyinkii hore
2.6 Higaada iyo codka
Vitae ama CV-ga loo soo gaabiyo waa dukumeenti loo isticmaalo sidii qalab lagu soo bandhigi lahaa xiriir cad oo cad oo ku saabsan xogta, xirfadaha iyo khibradaha shaqo ee qofka, iyadoo la doonayo in lagu daro liiska wareysiga shaqada.
Si aad si fiican u fahamto, waxay la mid tahay xayaysiis wanaagsan ama martiqaad uu soo diray ama keenay codsadaha shaqo, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka ku saabsan noloshooda shaqada, macluumaadka xiriirka iyo tilmaamaya meesha ay deggan yihiin. Hadafka resume waa in la dhaliyo a aragti wanaagsan iyo xiiso si aad naftaada u sheegto oo aad u hesho waraysi shakhsi ah, oo ku dhammaanaysa in aad hesho shaqada aad rabto.
Xogta shakhsiyeed waa in lagu daraa taariikh nololeedka, si wax badan loo qabto fududahay in la akhriyo lana fahmo qofka aad tahay, sida lagula soo xiriiri karo iyo waxa aad qabaneysay sanadihii ugu dambeeyay.
Waxaa ka mid ah xogta ugu muhiimsan:
Magacyada iyo naaska.
Taariikhda iyo goobta dhalashada.
Nambarada xiriirka, ugu yaraan laba.
Ciwaanka iimaylka gaarka ah ee aad si joogto ah u gasho.
Daraasado la sameeyay oo tilmaamaya taariikhda bilawga iyo dhamaadka, xarunta akadeemiyada, iyo goobta laga fuliyay.
Koorasyada shahaadada koowaad ee jaamacadda, koorsooyin ama aqoon-is-weydaarsiyo ayaa sidoo kale la fuliyay kuwaas oo muujinaya bilowga iyo dhammaadka taariikhda, xarunta, iyo goobta lagu qabtay.
Waayo-aragnimada xirfadeed ee tilmaamaysa bilowga iyo dhammaadka taariikhda, magaca shirkadda iyo hawlaha la qabtay.
Luqadaha aad taqaanid iyo heerka u dhigma.
Khaladaadka suuragalka ah
Taasi cinwaanka ha ahaato "Curriculum Vitae": Haddii aad rabto in CV-gaagu ka soo baxo inta kale, waxa fiican inaad geliso cinwaan kale oo cajiib ah.
Jihada email aan habboonayn: samee email fudud oo xirfad leh.
ka khaladaadka higgaadda: Waa mid ka mid ah khaladaadka ugu xun ee aad geli karto. Hubi inaad wax walba u qorto si qumman.
Samee CV dhammaan: Dadka intooda badan waxay isticmaalaan resume isku mid ah dhammaan dhajinta shaqada. Waa in aad u habayso CV-gaaga boos kasta.
Muy ballaaran: in manhajkaaga waxbarasho uu ka kooban yahay 4 bog macnaheedu maaha inay ka wanaagsan tahay. Ku darso kaliya macluumaadka ugu muhiimsan.
Adeegso a luqad ay adagtahay in la akhriyo: iska ilaali isticmaalka soo gaabin badan, neologisms, farsamooyin, iyo kuwo kale. Waa inaad sidoo kale isticmaashaa luuqad dhexdhexaad ah.
Ku dar faahfaahin taas maaha kuwo khuseeya: Ma xuma in aad qorto waxyaabaha aad hiwaayadda u leedahay laakiin haddii aysan waxba ku soo kordhin, waxaa fiican in aadan gelin.
Demasiado hal-abuur: Haddii aad tahay qof hal-abuur leh, ma xuma in CV-gaaga lagu soo bandhigo, balse waa in aad ka fogaataa in aad ku xad-gudbiso adigoo isticmaalaya far, midabyo iyo kuwo kale.
Isku xidhid la'aanKahor intaadan gudbin resume, si fiican u eeg taariikhaha xaqiijinta inay sax ku tahay taariikhdaada shaqo. Dib-u-dejinta aan joogtada ahayn waxay kicisaa shakiyo badan, taas oo keeni karta in lagugu tuuro habka xulashada.
Aan soo muuqan Guulahaaga: waa inaad ku dartaa guulahaaga, laakiin adigoon isla weynayn.
Khalad dhig xogta- Hubi in lambaradaada iyo ciwaannadaada iimaylka ay si sax ah u higaadiyeen. Xitaa haddii aad tahay musharrax wanaagsan jagadaas haddii aad xogta xiriirkaaga khalad ka dhigto, waad luntay.
Muy dhexdhexaad ah: Haddii aad hayso waxyaabo wanaagsan oo aad ku muujin karto CV-gaaga, dhig adiga oo aan is-goyn.
Foomka caajisey: Waa in aanad noqon mid hal-abuur leh, laakiin haba yaraatee ha ahaato mid hal-abuur leh. Raadi qaab soo jiidanaya dareenka oo leh tafaasiil hal abuur leh oo adiga kugu habboon, oo muujinaya qayb ka mid ah shakhsiyaddaada.
Ujeeddo aan caddayn: waa in aad caddaysaa ujeedooyinkaagu, adiga oo diiradda saaraya baahiyaha shirkadda.
Kala duwan noocyada: isticmaal hal nuqul oo CV ah, iyo in kani yahay kan ugu soo jiidashada badan iyo kan shakhsiyaddaada ku habboon.
Iyadoo ku xiran nooca resumeyga, waxay ka samaysan kartaa naqshado kala duwan. Waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Taariikh ahaan: waa manhajka oo dhammaan khibradaha xirfadeed lagu habeeyo taariikhda. had iyo jeer bilawga meeshii ugu dambaysay ee aad ka shaqaynaysay. Way ku fiican tahay inaad isticmaasho haddii aad leedahay khibrad yar ama aadan lahayn oo aad u baahan tahay CV gaaban.
Dib u noqosho taariikhiyeed: waa kan ugu isticmaalka badan, waa nooc ka mid ah CV-gii hore. Inkasta oo habka ay tahay in aad ku darto waayo-aragnimada xirfadeed uu isbeddelo, kiiskan waa inaad ka bilowdaa inaad ku jirto waayo-aragnimada xirfadeed ee ugu dambeysay ilaa kan ugu da'da weyn. Waxaa la adeegsadaa marka jagooyinka la qabtay ay isku mid yihiin oo ay joogto yihiin muddo.
Taariikh ahaan hawleed: waayo-aragnimada waxa loo kala saarayaa hadba jagada iyo jagada laga hayo xaalad kasta. Waa inaad isticmaashaa haddii aad soo qabatay 2 jagooyin ama ka badan laakiin shirkado kala duwan
Isku dhafan: waa isku darka manhajka shaqeeya iyo taariikhda. Waa ta ugu badan ee lagu taliyay oo ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan, maadaama ay aad u nidaamsan tahay oo ay fududahay in la eego.
Creativo: Nooca resume ah ayaa sidoo kale aad loo isticmaalay sannadkii hore. Samee farqi gaar ahaan haddii aad ka codsato qaybaha sida naqshadeynta, daabacaadda iyo nooca xirfadda hal-abuurka ah, si aad u siiso muuqaal yar oo ku saabsan waxaad awood u leedahay inaad qabato.
Waa muhiim inaad u fiirsato meeshan boostada, maadaama sidii aan horay u soo sheegnay, CV-ga si wanaagsan loo qorsheeyay ayaa kaa caawin kara inaad hesho shaqada riyadaada. Kaliya waa inaad taqaan waxaad dhahdo. Raac tillaabooyinkan aan ku tusinno sida loo sameeyo resume soo jiidasho leh.
Sifee astaanta wanaagsan ee naftaada
Xogta xirfada leh waxay ka kooban tahay jumlad gaaban oo muujinaysa khibradaada shaqo ee hore iyo waafaqsanaantaada sare ee booska banaan ee laga helay shaqo bixinta. Tani waa inay ku jirtaa darajadaada ama booskaaga, xirfadaha loo baahan yahay, iyo kartida saxda ah ee shaqada.
Ku dar macluumaadka xiriirka
Macluumaadka xiriirka waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan CV-gaaga. Loo-shaqeeyayaasha badankoodu waxay ku taliyaan inay ku daraan magacaaga oo buuxa, lambarka taleefankaaga, iyo ciwaanka emailkaaga. Hubi in aanay wax khalad ahi ku jirin qaybtan iyo in macluumaadkaaga xidhiidhka uu yahay mid cusub.
Ku darso xirfadahaaga
Tallaabadan waxaad u baahan tahay inaad sameyso a falanqaynta shakhsiyadaada si loo ogaado xirfadaha kaa dhigaya mid ku haboon booska. Tusaale ahaan, xaqiiqda fudud ee ah inaad ku jirto booska xiriirka macmiilka, waxaa laga yaabaa in hal-abuurkaagu aanu ahayn mid ku habboon, halka dareenkaaga mas'uuliyadda iyo nidaamkaagu yahay. Isku day inaad ujeedo noqoto intii suurtogal ah si aad u aqoonsato xirfadahaaga iyo kartidaada.
Shirkado badan Isticmaal hababka raadraaca codsadaha si aad u sawirto CV-ga ka hor inta uusan akhriyin shaqaale qore. Nidaamyadan otomaatiga ah waxay raadin karaan ereyo gaar ah oo aad ku dartay CV-gaaga. Haddii aad rabto in macluumaadkaagu dhaafo shaandhada kowaad, hubi inaad raacdo tillaabooyinkan:
Ku soo dir CV-gaaga qaab .DOC ah halkii aad ka ahaan lahayd qaab PDF ah.
Ku rid macluumaadka muhiimka ah madaxa ama qaybta hoose.
U habeyn qoraalka xabbado.
Isticmaal ereyada muhiimka ah dhammaan dukumeentiga.
Waxa ay tahay inaad ogaato. waa in aad falanqeyn karto sharraxaadda booska aad codsaneyso oo aad LinkedIn ka raadin karto profiles la mid ah si aad u soo saarto ereyada muhiimka ah oo aad u isticmaasho CV.
Samee shaqooyinkii hore
Jagooyinka banaan qaarkood waxay deymin ka badan yihiin kuwa kale soo bandhigida tusaalooyinka. Haddii aad ka shaqeyso, tusaale ahaan, warshadaha naqshadeynta, ku dheji CV-gaaga Portfolio leh muunado ka mid ah kartidaada ama ku dar xiriirka haddii aad leedahay faylalka dhijitaalka ah. On Behance waxaad samayn kartaa akoonkaaga si aad ugu shubto tusaalooyinka shaqadaada si fudud oo bilaash ah.
Higaada iyo codka
La soco in resumeygaagu aanu lahayn khaladaad higaada. Haddii aad shaki ka qabtid kelmad gaar ah, waxaad kala tashan kartaa sixid kasta oo online ah. Haddii aad CV-gaaga ku qorto Ingiriisi, sidoo kale hubi higgaaddaada oo isku day inaad daryeesho codka aad kula hadlayso dadka kale. Aad bay muhiim u tahay in dadka kale ay arkaan sawirka saxda ah ee hadalkaaga.
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, waa lagama maarmaan in aad haysato sawir muuqaal ah waa midab, iyada oo aan lahayn xoqin ama pixels dhexdooda iyo in kuwa kale ay aqoonsan karaan qofka aad tahay. Taas awgeed, waxaa habboon in aad isticmaasho asal lebis ah, ama asal monochrome ah oo aan wax kale ka muuqan, adiga mooyaane.
Haddii aad heerkan gaartay boostada, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad bilowdo qorista resumeygaaga oo ku saleysan tabaha aan ku siinnay.
Hadda waxaan kaliya kuu rajaynaynaa nasiib wanaagsan jidkaaga guusha!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Talaabooyinka lagu abuurayo CV soo jiidasho leh
Maqaal aad u wanaagsan, inkasta oo ay tahay inaan tixgelinno bixinta xogta shakhsi ahaaneed sida DNI, oo ay weheliso magaca buuxa iyo cinwaanka buuxa waxay noo keeni kartaa, tusaale ahaan, dhibaatada xatooyada aqoonsiga haddii CV-gaas uu galo gacmo khaldan ama loo qaybiyo si aan kala sooc lahayn.
Waxaa habboon in aan la bixin DNI ama ciwaanka oo dhammaystiran. Haddi aan gaadhno waraysiga, mar hore ayaa nala waydiin doona ama waanu u fududayn karnaa
U jawaab Daniel Balaguer
Sida loo isku daro lakabyada Photoshop